Ọtụtụ mba 'na-echebara echiche' maka ndị njem nleta Russia
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ọtụtụ mba 'na-echebara echiche' maka ndị njem nleta Russia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Nnyocha ọhụrụ ahụ gosipụtara na Ndị njem Russia theụọ mmanya kacha nta na UAE, na naanị 39% kwetara na-a drinkingụ ebe ahụ. Ndị njem nleta na-ahụkarị ala nke Sharjah, ebe amachibidoro mmanya mmanya kpamkpam, naanị ndị nwere ikikere gọọmentị nyere ikikere ịnwe mmanya dị ike.
Qatar weghaara ọnọdụ nke abụọ n'ọkwa: pasent 20 nke ndị njem nleta anaghị a drankụ mmanya na steeti Arab a. Achọpụtara na na Qatar, a na-ere mmanya na-aba n'anya n'otu ụlọ ahịa na mba ahụ dum, ọ bụ naanị na kaadị ndị ọbịa pụrụ iche. Otu pasent nke ndị zaghachiri zara na ha enweghị ike ị drinkụ mmanya na Maldives - amachibidoro ya ebe ahụ.
Ọzọkwa, ọtụtụ ndị Russia kwetara na ha 'adịghị njikere' ịga mba ndị a dị n'elu n'ihi enweghị ohere ị toụ ebe ahụ.
Ọtụtụ ndị Russia gbara ajụjụ n'ọmụmụ ihe kwetara na ha na-a toụ mmanya na-aba n'anya n'oge ezumike. Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ duziri nyocha n'etiti ndị njem 3.5 puku Russia iji chọpụta otu ha si emetụta ị drinkingụ mmanya na-aba n'anya na ezumike. Ọ bịara bụrụ na pasent 67 nke ndị njem nleta na-a alcoholụ mmanya mgbe niile na njem.